VI VERTETSTST OMA N'ANYA N'AKA AKA NA-EGO | Rayson
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi Ngwa Ndị China Ochie Mata Mbur Ndị na-emepụta-. Matsisi ike na-emesi ihe ike ngwaahịa a na-apụta maka ihe ọ bụla nke kwụsiri ike. Na-emeso n'okpuru okpomọkụ ma ọ bụ oyi okpomọkụ, ihe ndị na-arụ ọrụ ya nwere ike iguzogide ọnọdụ dị njọ. Ọ bụ ebe obibi. Ọ gaghị ewepụta mmetọ dị ka olu, na-eduru ya, ma ọ bụ ihe ndị NKPEL nọ n'ụwa mgbe ọ na-ekpochapụ ya. matraasi na-achị achị Emepụtara usoro dị iche iche gụnyere usoro ọdịdị ọdịnala, pyrarograph dị elu, na agba glazed. Ọ nwere nkọwa dị mma, ahịrị dị larịị, na ụkpụrụ mara mma. Ọrụ pụrụ iche na ịdị mma na-egosipụta na nkọwapụta.
Mgbe ọtụtụ afọ nke siri ike na ngwa ngwa, Rayson etoola n'otu n'ime ndị ọrụ kachasị aka na ndị ọrụ na China. VI VI Ihe mkpokọta anyị ga-eme ike anyị niile ijere ndị ahịa ozi niile site na imewe ngwaahịa, R & D, inyefe. Nabata ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ gbasara ngwaahịa ọhụrụ nke VIRY matrality outlet ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị. A na-emeso akwa ya dị iche iche ka ọ bụrụ ụdị nje na fungi ọ bụla.